« Lalao Biblia Quiz » – FMBM: ho fanorenana ny trano foibe vaovao | NewsMada
Nifarana, ny 30 jona 2017, ny lalao fifaninanana « Biblia Quiz”, nokarakarain’ny Fikambanana mampiely Baiboly malagasy (FMBM), ary ny 21 jolay teo, natolotra ny fanomezana ho an’ireo olona 60 nandresy, tao amin’ny efitrano lehiben’ny Iscam. Nahazo ny voalohany Raharimanantsoa Tafika, tamin’ny isa 25 547 700 ; faharoa Raherinirina Léon, isa 13 785 500 ary fahatelo Rasolofoarison Diminarivo Jean Stéphan, isa 12 655 500.
Natao iny lalao Biblia Quiz iny ho fampandraisana anjara amin’ny fanorenana ny trano foiben’ny FMBM vaovao eo Antaninarenina. Natao ihany koa mba hampirisihana ny fampiasana ireo fitaovan-tserasera avolenta amin’ny lafiny tsara, hivelaran’ny maha olona manontolo. Manana anjara asa lehibe amin’izany ny Soratra Masina.
Tafiditra ao anatin’ireo tondrozotra sy paikady apetraky ny FMBM Eran-tany (FMBET) rahateo ny hahatonga ny Tenin’Andriamanitra ho eny an-tanan’ny olona amin’ny fomba sy endrika rehetra. FMBM, sehatra fiaraha-miasan’ny fiangonana, ny fikambanana ary ny kristianina eto Madagasikara, hampiroboroboana ny fampielezana ny Soratra Masina.
Niforona ny 21 jona 1965 ny fikambanana ary nankatoavina ho mpikambana mahefa ao anatin’ny FMBET, ny taona 1972. I Madagasikara heniky ny fahalalana an’i Kristy amin’ny alalan’ny Soratra Masina no vina iorenany ary mizara ho efatra lehibe ny antom-pisiany eto amin’ny firenena : mandika ny Soratra Masina amin’ny fiteny azon’ny olona, mamokatra ny Soratra Masina amin’ny endriny ilàn’ny maro azy, mampiely ny Soratra Masina amin’ny vidiny takatry ny rehetra, ary mampiofana sy manentana ny fandinihana sy ny fampiasana ny Soratra Masina. Manolotra fisaorana feno ny mpandray anjara 152 izay avy amin’ny faritra samihafa ny FMBM. Niarahana tamin’ny orinasa Telma, Orange, Airtel ary Emadex ny lalao.